'भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ' - Music and Movies - Bridge to Nepal & Nepali
Topic: 'भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ'
Author Topic: 'भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ' (Read 667 times)
'भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ'
« on: February 15, 2010, 09:31:47 AM »
शिव शर्मा कास्की, फाल्गुन ३ -
बलिउडमा व्यस्तता कम हुँदै गएपछि मनीषा कोइरालाले 'फेरि भेटौंला' पछि दोस्रोचोटि नेपाली सिनेमामा देखा पर्दै छिन् । नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्ममै उनलाई हेर्न २२ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । 'धर्मा' को छायांकनका लागि उनी चार दिन पोखरामा रहिन् ।
सुटिङ सकेर पोखरा घुम्ने उनको चाहना भने पूरा भएन । 'सुटिङले गर्दा यताउति कतै जान पाइएन,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'सुटिङमै व्यस्त हुनुपर्‍यो, एक दिन मौसम खराबीले कामै भएन ।' टेलिभिजन हेर्दै र आफन्तसँग फूलबारी रिसोर्टमा गफगाफ गर्दैमा बित्यो त्यो
दिन । उनका साथ बाबुआमा र भाइबुहारी पनि थिए ।
'धर्मा' शाहीकालीन मन्त्री डा. दुर्गा पोखरेलको लगानीमा बन्दै गरेको हो । २२ वर्षअघि 'फेरि भेटौंला' छायांकनमा पोखरा टेकेकी नायिकाले दोस्रो चलचित्र यहीँ गर्न पाएकामा खुसी लागेको बताइन् ।
खुलेको हिमाल देखेर दंगिएकी मनीषा बारम्बार हिमाललाई नै पृष्ठभूमि पारेर सुट गर्न छायांकार राजुविक्रम थापालाई भनिरहेकी हुन्थिन् । थापाले पनि उनका इच्छा पूरा गरिरहे ।
नेपाली राम्रोसँग बोल्न र बुझ्न नसक्ने मनीषालाई सुटिङ क्रममा गीत याद गरेर नाच्न निकै हम्मे पर्‍यो । सुटिङ युनिटका प्राविधिकदेखि अन्य सदस्यसम्मलाई अंग्रेजी लवजको उनको नेपाली बुझ्न कठिन भयो । 'बलिउडतिर हेलमेल बढी हुँदा मेरो नेपालीमा समस्या आएको छ,' नायिकाले भनिन, 'परिवारका सदस्यसँग बढी नेपाली नै बोलेर सुधार्ने प्रयासमा लागेकी छु ।'
सराङकोट, फेवाताललगायतमा सुटिङ गर्ने भनिए पनि पूरा नहुने डरले 'धर्मा' युनिटले फूलबारी रिसोर्ट परिसरमै सकायो । 'म छिटो र्फकनुपर्ने भएकाले हतार गर्नुपरेको हो,' मनीषाले
भनिन्, 'छोटो समयमा सुटिङ सकिए पनि निकै रमाइलो अनुभव भयो ।'
मनीषाले राम्रो अफर नआएकाले नेपाली चलचित्रमा नदेखिएको बताइन् । 'अफर त बीचमा आएका थिए तर कथा राम्रो लागेन,' उनले भनिन्, 'अहिले कथा मन पर्‍यो र खेलेँ । राम्रो र चित्तबुझदो भयो भने अरू पनि खेल्नेछु ।'
'धर्मा' मा राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, संयोग पोखरेल, अनु शाह, माधव आचार्यसहितले खेलेका छन् । पोखरा आउनुअघि मनीषा १५ दिन काठमाडौंमा भएको सुटिङमा व्यस्त थिइन् । उनी मनीषा गत बिहीबार हतार-हतार सुटिङ सकेर काठमाडौं फर्किएकी थिइन् ।
'उनी एकदुई दिनमै मुम्बई र्फकनुपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो,' निर्देशक दीपेन्द्र के खनालले भने ।
तपाईं नेपाली राजनीतिमा आउने हल्ला चल्दै छ नि ?
भविष्यमा आउन पनि सकिन्छ । त्यसबारे अहिल्यै केही नभनूँ । पछि जे पनि हुन सक्छ ।
नेपालको अवस्था कस्तो लाग्यो ?
देशको अवस्था निकै खराब बन्दै गएको छ । समयमा संविधान बन्ने हो कि होइन, आशंका उत्पन्न भएको छ ।
यस्तो हुनुमा कसको जिम्मेवारी देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक पार्टीहरूको । उनीहरू अपेक्षित रूपले जिम्मेवार हुन सकिरहेका छैनन् । एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आपसमा झगडा गरिरहेका छन् । समस्या हल गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको
तपाईंलाई मुम्बईमा बसेर पनि देशको चिन्ता लाग्छ र ?
जहाँ बसे पनि आफ्नो जन्मभूमि प्यारो हुन्छ । म पनि यही देशकी नागरिक हुँ । ममा पनि जिम्मेवारी छ । अरू देशले नेपालको अवस्था भद्रगोल छ भन्दा दुःख लाग्छ ।
आफूलाई भारतमा हुँदा भारतीय र यहाँ आउँदा नेपाली कलाकार त भन्नुभएको छैन ?
सुरुमा बलिउड प्रवेश गर्दा भारतीय कलाकार भन्नुपर्छ भनेर त्यहाँ धेरैले दबाब दिएका थिए । तर, मैले यस्तो हो भने सिनेमा नै खेल्दिनँ भनेकी थिएँ । म नेपाली हुँ, नेपाली भएर नै काम गर्छु । म आफ्नो राष्ट्रियतालाई आघात पुर्‍याएर कहिल्यै काम गर्न चाहदिनँ ।
Re: 'भारतीय हुनुपरे फिल्म नै खेल्दिनँ'
« Reply #1 on: February 15, 2010, 04:33:59 PM »
j bhani thikai bhani maisha le la badhai cha.
« Reply #2 on: October 01, 2010, 12:13:54 AM »
maile ta ajha samma thah napayeko aja matra thah paye................ anyway thanks
« Reply #3 on: October 01, 2010, 03:40:16 AM »
« Reply #4 on: December 30, 2010, 05:39:17 AM »
Good manisha aunty